ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဆောင်ရွက်ဆဲဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံများ
၆၆ကေဗွီ ဖလမ်း-သိုင်းငင် ဓာတ်အားလိုင်း (၂၂.၂၇) မိုင် စီမံကိန်း
၆၆ကေဗွီ မင်းတပ်-မတူပီ ဓာတ်အားလိုင်း (၅၁)မိုင်နှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံစီမံကိန်း
(၁) ၆၆ကေဗွီ ဖလမ်း-သိုင်းငင် ဓာတ်အားလိုင်း (၂၂.၂၇) မိုင် စီမံကိန်း
၆၆ကေဗွီ ၆၆ကေဗွီ ဖလမ်း-သိုင်းငင် ဓာတ်အားလိုင်း (၂၂.၂၇) မိုင်
(က) စာချုပ်အမှတ် (ပစ္စည်း) − PO. No. 44/MEPE(PTP)/2014-2015
ကုမ္ပဏီအမည် − CCPG Co., Ltd
(ခ) ကုမ္ပဏီအမည် − MTEG Co., Ltd.၊ သုခကောင်းကောင်းကုမ္ပဏီ
(တည်ဆောက်ရေး) − သော်ဇင်ဟိန်းကုမ္ပဏီ၊ ရွှေဝန်းပြည့်ကုမ္ပဏီ
၄။ လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ် − ၁၂.၈.၂၀၁၅
၆။ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ − ဓာတ်အားလိုင်း− ၇၇.၄၁%
(၂) ၆၆ကေဗွီ မင်းတပ်-မတူပီ ဓာတ်အားလိုင်း (၅၁မိုင်) နှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံစီမံကိန်း
ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်မြို့နှင့် မတူပီမြို့။
၆၆ကေဗွီ မင်းတပ်-မတူပီ ဓာတ်အားလိုင်း(၅၁မိုင်) ၊
၆၆/၁၁ကေဗွီ၊၅အမ်ဗွီအေ မတူပီ ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ခြင်း
စာချုပ်အမှတ် − 39/MEPE(PTP)/2015-2016
ကုမ္ပဏီအမည် − Aung Myint Mo Co., Ltd.
၄။ လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ် − ၂၄.၃.၂၀၁၆
၅။ လုပ်ငန်းပြီးစီးမည့်နှစ်(ခန့်မှန်း) − ၂၀၁၉ ခုနွစ္
၆။ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ −ဓာတ်အားလိုင်း − ၂၄.၃၈%
− ဓာတ်အားခွဲရုံ − ၃၇.၆၅%